Ma heli karo 787-800
Su'aal Ma heli karo 787-800
Bilood 10 3 todobaad ka hor #1160 by Schachow
Waxaan soo dejiyey oo aan ku rakibay Alejandro Rojas 'TDS 787-800 ee P3D laakiin ma muujinayso Gawaarida iyo Simobotyada / Diyaaradaha.
Miyuu wax ka maqnaa?
Caawimaad kasta waa la soo dhaweynayaa.
Bilood 10 3 todobaad ka hor #1161 by rikoooo
Waxaa laga yaabaa inaad seegtay jidka saxda ah. Fadlan rakib mar kale oo hubi inay galaan faylkaaga P3D. Waa nooca loo yaqaan Prepar3D ee habka loo maro?